EMMO/NAT : Fampiharana ny hamehana ara-pahasalamana
mercredi, 07 avril 2021 18:35
Nanao fanambarana ny teo anivon'ny EmmoNat androany 07 aprily 2021 tetsy amin'ny Toby Jeneraly Ratsimandrava Richard, mahakasika ny fampiharana ny hamehana ara-pahasalamana izay mihatra ankehitriny eto amin'ny tany sy ny firenena.
- Voalaza tamin'izany fa anisan'ny mikatona ny Faritra Analamanga. Nambara mazava anefa fa ny olombelona no tena tsy mahazo mivezivezy fa ny entana kosa dia afaka mivezivezy araka ny tokony ho izy fa ny mpamily sy ny mpamily mpanampy ary ny tompon'entana no ao anaty fiara.
- Namafisiana araka izany ihany koa fa Faritra Analamanga no resahana eto fa tsy Antananarivo Renivohitra. Izany hoe any amin'ny toerana hifaranan'ny Faritra Analamanga no mipetraka ny barazy ; Ohatra raha ny lalam-pirenena faha 7 dia any Tsinjony no misy ny barazy, raha amin'ny RN4 kosa dia any Ramala ny barazy.
-Voalaza manarak'izany ny mahakasika ny fivezivezen'ny razana, ka nambara mazava fa raha matin'ny Covid-19 ny olona iray dia efa misy ny fepetra mifanaraka amin'izany ny andevenana iny olona iny eo an-toerana ihany, ary ny isan'ny olona manatrika ny fandevenana aza dia efa voafaritra avokoa, tsy mihoatra ny 10.
Raha tsy Covid-19 kosa no nahafaty ilay olona dia manaraka ireo lalàna velona eto amin'ny Tany sy ny Firenena, izany hoe manantona eny amin'ny BMH mikarakara ireo antonta-taratasy rehetra ilaina momba izany, izay vao afaka hoentina ilay razana.
Raha toa ka tsy manana ireo taratasy ireo ny tompon-kavana dia tsy azo atao ny mitondra ny razana mandeha mivoaka ny Faritra.
Hisy fepetra ho raisina manoloana izany raha sanatria ka misy minia mandika izany fepetra izany.
-Mahakasika ny fivezivezena, hoe mandalo fotsiny eto Analamanga, dia nambara mazava fa tsy misy mihitsy ny atao hoe passage fa mijanona tanteraka ny fivezivezena ato anatin'Analamanga.
- Voalaza anefa fa ireo mpanao gazety, mpitsabo, mpiasan'ny JIRAMA izay manana asa maika tsy maintsy atao dia omena alalana hivezivezy malalaka ao anatin'ny fanatanterahana ny asany, na atoandro na alina.
- Nanambara ihany koa ny Tale jeneralin'ny ATT mahakasika ny lamina momba ny fifamoivoizana fa Faritra efatra no mikatona eto Madagasikara, dia ny Faritra Analamanga, Antsinanana, SAVA, ary Boeny, ankoatry ny tanànan'i Nosy-Be.
Nambarany fa ny zotra Urbaine, Suburbaine sy ny Régionale ao anatin'ireo Faritra efatra mikatona ireo dia mbola mandeha ara-dalàna fa ny fivoahana sy fidirana an'ireo Faritra ireo kosa dia tsy azo atao.
- Nofaritana mazava anefa fa voafetra ny toerana ao anaty fiara ka olona 03 isaky ny "rangé" iray ny MINIBUS genre MAZDA, raha olona 04 isaky ny "rangé" kosa ny MINIBUS genre SPRINTER.
- Tsy azo asiana olona eny amin'ny "couloir" ary tsy azo atao ny mampiasa ny "seza volamena".
- Tsy azon'ny fiara atao ny mitaona olona eny amin'ny barazy satria tsy manana alalana amin'izany izy, ohatra : avy any Toliara andeha eo amin'ny barazy Tsinjony, na koa hoe avy ao Ambatondrazaka andeha ao Anjiro.
-Mahakasika ireo olona hody ; efa tapitra omaly 06 aprily ny fe-potoana nomena ireo olona izay hamonjy fodiana, nefa raha misy fiara mbola eny andalana hody ka voamarika tsara ao anatin'ny manifold ny fotoana niaingany niala ny faha 04 na ny faha 05 ny volana aprily nefa mbola eny an-dalana noho ny halaviran-toerana dia avela hiditra eto Analamanga.